सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, तोलाको कति ? - सिम्रिक खबर
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, तोलाको कति ?
काठमाडौँ । विहिबार सुनचाँदीको मुल्यमा गिरावट आएको छ । आज सुनको भाउ तालामा ९०० रुपैयाँले घटेको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला छापावाला सुन ९६ हजार ६०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ९६ हजार १०० रुपैयाँ तोकिएको छ । सुनको भाउ हिजो बुधबार स्थिर रहेको थियो। यो दिन प्रतितोला फाइन गोल्ड ९७ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९७ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
गत मंगलबार सुनको भाउ तोलामा ६०० रुपैयाँ बढेको थियो। यो वृद्धिसँगै मंगलबार प्रतितोला फाइन गोल्ड ९७ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९७ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। गत सोमबार तोलमा ४०० रुपैयाँ बढेको सुनको भाउ आइतबार भने स्थिर रहेको थियो। आज चाँदीको भाउ पनि २० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला १ हजार ३२०रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो भाउ स्थिर रहँदै प्रतितोला चाँदी १ हजार ३४० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। सुनचाँदीको मूल्यमा घटबढ भइरहेपनि बजारमा कारोबार भने एकदम सुस्त रहेको ब्यापारीहरुले बताएका छन् ।